प्रविण र एलिनाको 'फूल राम्रो'मा आकाश र सम्झनाको गज्जब अभिनय Canada Nepal
काठमाडौँ । पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक प्रविण बेडवाल र गायिका एलिना चौहानको चर्चा चौतर्फी छ ।
प्रविण र एलिनाको स्वर रहेको नयाँ गीत 'फूल राम्रो'को भिडियो बजारमा आएको छ । गीतकार कृष्ण के सीको शब्द तथा संगीत र सुनिल परियारको एरेन्ज रहेको गीतको म्युजिक भिडियोमा नायक आकाश श्रेष्ठ र सम्झना खत्रीको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
निकेश खड्काको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा बुद्ध थापाको छायांकन र रुपेश खड्काको सम्पादन रहेको छ । अनिल केसीको प्रस्तुती रहेको भिडियो रिलिज भएसँगै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको निर्माण यूनिटले जनाएको छ ।
फाल्गुण २४, २०७७ सोमवार २०:४१:१० बजे : प्रकाशित
# एलिना चौहान
काठमाडौं । गायिका देवी घर्तीमगरको स्वर रहेको गीत मुटुको टुक्राको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । ज्योती गुरुङका शब्द शृजनामा तयार भएको गीतमा सुरज लामिछानेको संगीत र एरेन्ज रहेको छ । गीतमा एक प्रवासी आमाले स्वदेशमा भएका आफ्नै दुई सन्तानको सम्झनामा उपहार स्वरुप भिडियो पस्किएकी छिन् । भिडियोमा ज्योती स्वयमकै अभिनय रहेको छ ।
गीतमा बाल कलाकार काव्या श्रेष्ठका साथमा अंनिश्का थापा, शंकर पाण्डे, सलोनी रन्जितकार र इभा सिंह ठकुरीको अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतमा बाध्यात्मक परिस्थितीले विदेशीनुको पीडा र भोगाइ समेटीएको छ । ज्योतिले परवासबाट यो कोशेली आफ्ना दर्शकका लागि पस्किन पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।
बेलायतमा रहेर पनि ब्याक टु ब्याक उत्कृष्ट भिडियो निर्माण र ब्यस्त निर्देशकको परिचय बनाएका निर्देशक कुशल श्रेष्ठले नै यो भिडियो निर्देशन गरेका हुन् । जसमा छायांकन, सम्पादन, परिकल्प्ना पनि निर्देशक श्रेष्ठकै रहेको छ । भिडियोमा नबिन निरौलाको कलरिगं, दीपिका श्रेष्ठको मेकअप रहेको छ । भिडियो गीतकार ज्योतिकै युट्युव च्यानल जेजी क्रियशनबाट बजारमा आएको हो ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार २१:३४:३१ बजे : प्रकाशित
# देवी घर्तीम
दीपेन्द्रको नयाँ फिल्ममा धिरज मगर !
काठमाडौं - ‘छ माया छपक्कै’ निर्देशक दीपेन्द्र लामाले नयाँ फिल्म बनाउने तयारी गरेका छन् ।
हरेक फिल्मबाट चर्चा कमाएका दीपेन्द्रले अभिनेता धिरज मगरलाई लिएर नयाँ फिल्म बनाउन लागेको बताइएको छ ।
डेब्यु फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ बाट नै चर्चाको शिखरमा पुगेका धिरजसँग नयाँ फिल्मको लागि दीपेन्द्रले कुरा गरिरहेको बताइएको छ ।
हालै धिरजले फिल्म ‘आई एम ट्वान्टिवान’ को छायांकन पनि सकेका छन् । फिल्म साइन गरिसकेको बताइए पनि दीपेन्द्रले छलफलकै क्रममा रहेको बताएका छन् ।
उनले अहिले स्क्रिप्टमा काम भइरहेको र कात्तिकभन्दा अगाडि फिल्म नबन्े बताए । उनी अहिले फिल्म ‘दुई नम्बरी’ मा व्यस्त छन् ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १७:११:३८ बजे : प्रकाशित
# धिरज मगर
# दीपेन्द्र लामा
पल, सुधिर, प्रिज्मा र प्रिन्सीको 'कस्तो सुहाको' (भिडियो)
काठमाडौँ । गायक सुरेन चन्द र गीतकार तथा संगीतकार सिएल शर्माको सहकार्यमा तयार भएको नयाँ गीत कस्तो सुहाको फुली लगाको ट्रेण्डिगंमा आएको छ । जसमा गायक सुरेनलाई गायिका विशाखा शाहीले स्वरमा साथ दिएकी छिन् ।
सार्वजनिक भिडियो यो समाचार तयार पार्दासम्म भिडियो १ लाख ६५ हजार बढीले हेरेका छन् । साहस शाक्यको एरेन्ज रहेको गीतमा पल शाह र सुधिर श्रेष्ठसँग सुन्दरी जुम्ल्यहा दिदीबहिनीद्धय प्रिज्मा प्रिन्सी खतिवडाको गज्जब अभिनय रहेको छ ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १२:४६:२९ बजे : प्रकाशित
अभिनेत्री स्वेता खड्का ‘प्रवल जनसेवा चतुर्थ श्रेणी’ पदकबाट सम्मानित
काठमाडौं - नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री स्वेता खड्का 'प्रवल जनसेवा चतुर्थ श्रेणी' पदकबाट सम्मानित भएकी छिन् ।
उनलाई शुक्रबार विद्यादेवी भण्डारीले सो पदकबाट सम्मान गरेकी हुन् । आफु सम्मानित भएको बारे स्वेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएकी छिन् ।
उनले राष्ट्रपती भण्डारीमार्फत 'प्रवल जनसेवा चतुर्थ श्रेणी' पदकबाट विभुषित हुँदै गर्दा आफुलाई राष्ट्र र समाजको लागी अझै शसक्त भएर अगाडी बढ्न थप प्रेरणा मिलेको बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन् - 'कर्म गरे फल पाईंदो रहेछ । आज सम्माननीय राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारी ज्यु मार्फत 'प्रवल जनसेवा चतुर्थ श्रेणी' पदकबाट विभुषित हुँदै गर्दा मलाई मेरो राष्ट्र र समाजको लागी अझै शसक्त भएर अगाडी बढ्न थप प्रेरणा मिलेको छ । मेरो कर्तब्य पथमा आईपर्ने समस्या, चुनौती,बाधा अनि अड्चनहरुलाई पन्छाउँदै निरन्तर पाईला चालिरहन उत्साहित गर्ने यो पदकको मान र मर्यादालाई कायम राख्ने बाचाका साथ नेपाल सरकार लगायत मलाई साथ , सल्लाह , सुझाव र हौसला प्रदान गर्ने सम्पुर्ण ईष्ट-मित्र, संचारकर्मी , सहकर्मी लगायत सम्पुर्ण शुभचिन्तकहरु प्रती हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु'
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १२:०१:५६ बजे : प्रकाशित
# स्वेता खड्का
केदार घिमिरे 'माग्नेबुढा'को आज जन्मदिन
काठमाडौं - चर्चित हास्यकलाकार केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाको आज जन्मदिन परेको छ । २०३२ साल चैत २८ गते मकवानपुरको ठिङ्गनामा जन्मिएका केदारले आज आफ्नो ४७ औं जन्मदिन मनाउदैछन् ।
२०५८ सालदेखि कलाकारिता शुरु गरेका केदारले हालसम्म हिजो आजका कुरा ,गीताञ्जली, तितो सत्य , लोकलहरी’, जिरे खुर्सानी, मेरी बाँस्सै आदि लगायतका हास्य सिरियलमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
उनले दिनेश डिसी निर्देशित '६ एकान ६' बाट फिल्म क्षेत्रमा लागेका थिए । आज उनको जन्मदिनको अवसरमा विहानैदेखि शुभकामनाको आइरो लागेको छ । उनको जन्मदिनमा सिताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि शुभकामना दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामना दिदै भनेका छन् - 'जन्म दिनको धेरै धेरै शुभकामना प्रिय साथि एबम अभिभावक लाई !!'
चैत्र २८, २०७७ शनिवार ०७:३०:४६ बजे : प्रकाशित
# केदार घिमिरे
'माइतीघर २' मा अनमोल केसीले अभिनय गर्ने
काठमाडौं - फिल्म 'माइतीघर २' बन्ने भएको छ । माइतीघर २ मा अभिनेता अनमोल केसीले मुख्य भूमिका रहने भएको छ । दि सुपर काजोल फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्मलाई सुबोध चोपडाले निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले सन् १९६६ मा बनेको फिल्म 'माइतीघर' को नाम सापटी लिएर 'माइतीघर २' बनाउने भएका हुन् । निर्देशक चोपडाका अनुसार फिल्मको छायांकन नयाँ बर्षबाट शुरु गरिने भएको छ ।
अनमोललाई यस फिल्मको स्क्रिप्ट र आफ्नो भूमिका मन परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय अभिनेता अनमोल ए मेरो हजुर ४ मा व्यस्त छन् ।
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार २१:३९:३३ बजे : प्रकाशित
# अनमोल केसी